Ukuziqambela Okomuntu Siqu KumaSocial Media Kungukukhangisa Okungathembeki Kakhulu Okukhona | Martech Zone
Ukubeka uphawu komuntu siqu kwimidiya yezenhlalo kungukukhangisa okungathembeki kakhulu okukhona
NgoMgqibelo, Septhemba 17, 2016 NgoMgqibelo, Septhemba 17, 2016 Douglas Karr
Khohlwa izikhangiso zokudla nezokuphola; Ngicabanga ukuthi okunye ukumaketha okukhohlisa kakhulu okuku-inthanethi yibona ochwepheshe bezentengiso abaqhubeka nokugxeka ama-brand nokushumayela ukwenza izinto obala online.
Akunalutho ngaphandle kokusobala.
Ngisesikhathini esithokozisayo empilweni yami. Ibhizinisi lami lihamba kahle, impilo yami yangakithi inkulu, futhi nempilo yami iba ngcono okuyinyanga ngayinye edlulayo. Lokho kusho ukuthi, ibhizinisi lethu kanye nempilo yami uqobo kusenezinselelo ezinkulu. Ngiyakuhleka lokho, manje njengoba sengisungule amabhizinisi ambalwa engiwo engasebenziseki, Angisoze ngabuyela emsebenzini wesikhathi esigcwele. Ngenxa yalokho, akudingeki ukuthi ngizenze futhi ngilondoloze umkhiqizo ophelele ku-intanethi.
Ngenyanga edlule, ngibe nezingxoxo nabantu abambalwa lapho beqokomisa khona izingxoxo zami online. KuFacebook, ngixoxa futhi ngiphikisana ngezombusazwe nenkolo kube nokwethusa abaningi. Ngibe nabantu abambalwa embonini abangilandelayo ngamazwana engiwenzile noma ama-athikili engiwabile. Abantu abangavumelani nami bangitshela ukuthi ngilimaza ibhizinisi lami ngokukhuluma ngezibhamu, uNkulunkulu, nezepolitiki. Abantu abakwenzayo ziyavuma nami buthule ungidonsele eceleni bese uyangibonga ngokufaka… yize bengalokothi bathande noma baphawule ngezindaba engizixoxayo.
Ngivame ukuhlanganyela nabantu bobabili ukuthi ngikhuliswe ngokwehlukile. Ngakhula ngingumRoma Katolika, kodwa ingxenye yomndeni wami ingamaJuda. Ubaba wami wayeyindlovukazi eqinile, eyisishoshovu, futhi ethanda izwe… kepha umama wami wayengumFrentshi-waseCanada onomndeni ovulekile waseYurophu. Ngangikhuthazwa ukuthi ngikhulume futhi ngiphikisane. Futhi inhlonipho yeminye imibono yafunwa yizinhlangothi zombili zomndeni wami.
Lokhu kungaba yisibusiso noma isiqalekiso. Ngikhula, angikaze ngesabe izingxabano ezinenhlonipho. Kungifake enkingeni enkulu esikoleni esiphakeme. Ngemva kokuphothula iziqu zami, ukubhaliswa ebuthweni lezeMpi Yezempi kwangifundisa indlela yokuziphatha nenhlonipho. Ngenkathi ngisebenza, ngafundiswa abaholi ababekhuthaza ukuzimela nokuzibophezela komuntu siqu. Hlanganisa konke lokhu, futhi kwenza kube nesiphepho somlilo. Lokho kuhunyushwe lapho ngikhona online.
Kwanele ngami. Okuxakayo-ke ukuthi, lokho kuyisilwane esincane sabaholi bemboni abaningi online. Ukwabelana kwabo okungapheli ngempilo yabo ephelele kuyangikhathaza.
Mhlawumbe yisimo sethu sezombusazwe esihlukanisayo esingeziwe ekungathembekini online, kepha ngicabanga ukuthi kubi. Akukhona nje ukuthi i-bullcrap nje, kodwa ngizobuye ngiye ngisho nokuthi konke kuyingozi futhi kuyingozi. Mhlawumbe inkolo yakho nezepolitiki kungokwakho hhayi into ofisa ukuyidalula; Ngingakuhlonipha lokho. Kepha engingakuhloniphi ukusakazwa okungapheli kokuthi impilo yakho iphelele kanjani nokuthi ibhizinisi lakho lenza ngendlela emangalisayo.
Ungacabanga ukuthi ungumuntu osebenza ekukhuleni kwakho komuntu siqu nobuchwepheshe, futhi konke okubonayo ku-inthanethi abantu obabheka ku-inthanethi abakaze balwe? Kubonakala kimi ukuthi kungalimaza. Ngikholwa ukuthi ngiphumelele ngokwami ​​nangokomsebenzi kunabaningi balaba bantu - kepha awusoze wakwazi lokho ngokuqhathanisa amaphrofayili ethu online. Mhlawumbe kungenxa yokuthi ngilinganisa impumelelo yami ngokuthi bangaki abantu engibasizayo, hhayi ukuthi ngihleli kuluphi lolwandle.
Futhi ngasizathu simbe, ukwethembeka kwami ​​ku-inthanethi ngandlela thile kubonwa njengokulimaza ukuzazisa kwami ​​ngabaningi embonini yami. Yona imboni ethinta amagama afana nayo obala futhi ukwethembeka. Akunanoma yini kodwa.
Eminyakeni edlule, ngiye ngalandela amakhulu abantu embonini yami, futhi kukhona abambalwa abakhethiwe engiqhubeka nokuzibandakanya nabo. Babelana ngemizabalazo yabo yangasese, kwesinye isikhathi eyimfihlo kakhulu, yezempilo yengqondo. Babelana ngemizabalazo yabo yezempilo kanye noshintsho. Futhi babelana nezinselelo zabo zebhizinisi. Ngiyabakhuthaza, futhi bangigqugquzela ukuba ngibe umuntu ongcono, umholi ongcono, ubaba ongcono nomuntu webhizinisi ongcono.
Ungaba Kanjani Uthembeke Kakhulu Ku-inthanethi
Kuyangimangaza ukuthi ngize ngibhale lawo mazwi, kepha ngikholwa ukuthi ayadingeka. Nakhu engingathanda ukubona abaholi bezentengiso bekwenza ngokuba khona kwabo ku-inthanethi:
Vuma ubuthakathaka nezinselelo zabo. Sonke sinazo, futhi kuyakhuthaza lapho umuntu obukekayo wabelana naye ngezakhe.
Buza ukuthola usizo. Wonke umuntu udinga usizo, yeka ukuzama ukwenza sengathi unazo zonke izimpendulo.
Ungahlukıselana obala kakhulu. Ngezethameli futhi ufinyelele kulaba bathonya, kungakholeki kangakanani lapho bevuma labo abalwela ukunakwa online?
Khuthaza abanye ukuthi bangafeza lokho okufezile. Sonke sinqobile ubunzima ukuze sifinyelele lapho sikhona, sabelana ngokuthi ufike kanjani lapho ukhona khona masibazi ukuthi nabo bangakwenza.
Imithombo yezokuxhumana inikeza leli thuba elimangalisayo lokwakha ukuxhumana kwabantu online. Akukho lutho oludlula ukuthobeka, ukwehluleka, ukuhlengwa, nobuthakathaka, ngabe kukhona? Ngingahle ngingabi nabalandeli abaningi njengabanye embonini yami, kepha ngiyakuqinisekisa ukuthi nginobudlelwano obujule kakhulu nabantu abangilandelayo.
Impela, ngingaqamba umuntu oyimbumbulu, ngabelane ngempumelelo yethu yebhizinisi kuphela, futhi ngikhange abalandeli abaningi kakhulu. Kepha ngithanda ukuba nobudlelwano bangempela engibuthuthukisile eminyakeni edlule kunokucindezela amanga angenakufinyeleleka.
Tags: uphawu lomuntu siquSocial Media Marketing
I-Podium: Qoqa uphinde Uphathe Ukubuyekezwa ku-One Centralised Platform
I-Pimex: Phatha futhi wenze imali ngokuhola kwakho kokukhangisa
Sep 18, 2016 ku-9: 10 AM
Angiyena umnikazi webhizinisi, okuningi kwalokho okushoyo akusebenzi kimi ngqo. Futhi, angikho ezinkundleni zokuxhumana. (Ngibhalela izihloko zebhizinisi abangane nomndeni, yingakho ngithole isayithi lakho ngenkathi ngicwaninga.) Kodwa-ke, ngiyithokozele kakhulu indatshana yakho - angicabangi ukuthi ngake ngathola into ethembeke kanjena phambilini. Kuhle ukubona umnikazi webhizinisi ophumelelayo eligcina lingokoqobo, ngakho-ke ngiyabonga.
Sep 19, 2016 ngo-3: 33 PM
Ngiyabonga kakhulu, Rita!
UJohn Kelly Kelly
Sep 19, 2016 ngo-6: 47 PM
Ngingumuntu ongokomoya onolwazi lomuntu ... mmmm. Ngi… eh NGIYASIZA abantu ukuthi baphile impilo yabo ngokugcwele ”ngenkathi beqinisekisa ukuthi nabo bayabasiza abanye njengoba sikhula ..
I-athikili ekhanyayo ..kodwa ungumzenzisi… njengoba ngifunga ... .ibhokisi elivelayo livele langingenisa lapho imizuzwana embalwa edlule… ngakho..Yebo.nenhlonipho… .. Ngizolinda ukubona ukuthi impendulo yakho nabo kungenzeka ube nengxoxo…
Sep 19, 2016 ngo-9: 48 PM
Anginaso isiqiniseko sokuthi ibhokisi le-pop up linani nami ngokuthembeka ezinkundleni zokuxhumana. Ngicela ungazise.